10 “Mkpụrụ obi m akpọwo ndụ m asị.+M ga-ekwupụta nchegbu m na-enwe banyere onwe m.M ga-ekwu okwu dị ka o si ewute mkpụrụ obi m! 2 M ga-asị Chineke, ‘Akpọla m onye ajọ omume.Mee ka m mara ihe mere i ji na-esesa m okwu. 3 Ọ̀ dị mma ka i mee ihe ọjọọ,+Ka ị jụ ihe aka gị rụsiri ọrụ ike wee rụpụta,+Ka i mee ka ìhè gị na-enwukwasị atụmatụ ndị ajọ omume? 4 Ọ̀ bụ anya+ mmadụ ka i nwere,Ka ọ̀ bụ dị ka mmadụ efu si ahụ ihe ka ị na-ahụ?+ 5 Ụbọchị gị ọ̀ dị ka ụbọchị mmadụ efu,+Ka afọ ndụ gị ọ̀ dị ka ụbọchị mmadụ, 6 Nke na ị ga-anwa ịchọpụta njehie m,Na ị ga na-achọ mmehie m?+ 7 N’agbanyeghị na ị ma na ọ dịghị ihe m mejọrọ,+Ọ dịghịkwa onye na-anapụta m n’aka gị?+ 8 Ọ bụ aka gị kpụrụ m wee kee m,+I kere ahụ́ m dum, ma ị na-aga iloda m. 9 Biko, cheta na ọ bụ ụrọ+ ka i ji kpụọ m,Ọ bụkwa n’ájá ka ị ga-eme ka m laghachi.+ 10 Ọ́ bụghị dị ka mmiri ara ehi ka ị wụpụrụ m,Meekwa ka m kpụkọọ dị ka mmiri ara ehi kpụkọrọ akpụkọ?+ 11 I wee yiwe m akpụkpọ ahụ́ na anụ ahụ́ dị ka uwe,Jirikwa ọkpụkpụ na akwara jikọta m.+ 12 I nyewo m ndụ, gosikwa m obiọma;*+Nlekọta ị na-elekọta m+ echebewo mmụọ m. 13 Ihe ndị a ka i zobere n’obi gị.Amaara m nke ọma na ihe ndị a dị n’ebe ị nọ. 14 Ọ bụrụ na mụ emehiewo, i wee nọrọ na-ele m,+Ị dịghịkwa agụ m n’onye aka ya dị ọcha ná njehie m;+ 15 Ọ bụrụ na m mejọrọ n’ezie, nke m agwụla!+Ọ bụrụ na mụ emeghị ihe ọjọọ, agaghị m ebuli isi m elu,+N’ihi na ihere na nhụsianya zuru m ahụ́.+ 16 Ọ bụrụkwa na ọ dị mpako,+ ị ga-achụ nta m+ dị ka nwa ọdụm si achụ nta anụ,Ị ga-egosikwa ọzọ na ị dị ebube n’ihe banyere m. 17 Ị ga-akpọta ndị akaebe ọhụrụ gị n’ihu m,Ị ga-emekwa ka iwe ị na-eweso m dịkwuo ukwuu;Ihe isi ike zuru m ahụ́. 18 Ya mere, gịnị mere i ji mee ka m si n’afọ pụta?+A sị nnọọ na m kubiri ume, ka a ghara inwe anya hụrụ m, 19 N’ebe ahụ, m gaara adị ka onye ọ na-enweghị mgbe ọ dịrị ndụ;A gaara esi n’afọ kuru m gaa n’ili.’ 20 Ọ̀ bụ na ụbọchị ndụ m adịghị ole na ole?+ Ya hapụwa,Ya wepụ anya ya n’ebe m nọ, ka m gbasapụtụ ihu+ 21 Tupu mụ agawa—agaghịkwa m alaghachite+—N’ala ọchịchịrị na nke itiri,+ 22 N’ala gbachiri agbachi dị ka ọchịchịrị, n’ala nke oké ọchịchịrịNa ọgba aghara, n’ebe ìhè ya dị ka ọchịchịrị.”